Photo file/Mithun Kunwar
पाल्पा रामपुरकी कृषक लक्ष्मी तिवारीलाई यसरी गीत गाएर पञ्चेबाजाको तालमा दिनभर धान रोपाइँ गरेको याद झल्झली आउने गर्छ । त्यस समयमा उनी रोपाइँलाई एउटा ठूलो पर्वका रुपमा पनि लिने गर्थिन ।
असारे भाकामा आफ्ना साथीसङ्गीहरुसँग दिनभर गीत गाएर धान रोप्दा मेलो सकेको पनि उनलाई पत्तो हुँदैनथ्यो । धेरै परको पनि होइन । आजभन्दा दुई दशकमात्र अघिको स्मरण गर्छिन उनी । बाजे रोपाइँ (पञ्चेबाजा बजाउँदै गीत गाएर बाजाको तालमा गरिने रोपाइँ) गरेर आफ्ना साथीसँग हिलो खेलेर रमाइलो गरेको अनुभव उनीसँग ताजै छन् ।
अहिले यस्तो रोपाइँको प्रचलन त हराएको छ तर आफ्ना सन्ततिलाई ती पुराना यादहरु सुनाएरै भए पनि उनी चित्त बुझाउँछिन् । “जमाना सस्तो र सजिलो पनि आयो । अहिले सजिलै खेतीपाती गर्ने, जोत्ने आदि कामका लागि आधुनिक प्रविधिहरु भित्रिए अनि किन दुःख गर्नु ? वर्षाको रोपाइँकै लागि भनेर अब वर्षभरि हलगोरु किन पाल्नु ? सजिलो पाएपछि मानिसले अप्ठेरो किन गर्नु र ?” उनी सुनाउँछिन् ।
रोपाइँमा साथीभाइबीच मायाप्रेमका साथै ठट्यौली पाराका गीत गाउँदा एक प्रकारको रमाइलो वातावरण हुने गरेको तिवारीको अनुभव छ । पुराना असारे भाका तथा उवाली गीत गाएर धान रोपाइँलाई एउटा रमाइलो पर्वका रुपमा लिने गरे पनि अहिले भने परम्परा नै परिवर्तन भएको उनी बताउँछिन् ।
उनी भन्छिन्, “दिनभर धान रोपाइँको रमाइलोले थकाइ लागेको पनि पत्तो हुन्नथ्यो तर अहिले हिजोका ती दिनहरु र त्यो वातावरण आँखामा झलझली घुमेर आउँछ, बिहान ट्र्याक्टर लगायो भने दिउँसो एकै छिनमा खेत रोपेर सकिन्छ” ।
आधुनिक प्रविधिको विकासले खेती गर्न सजिलो बनाएको त छँदैछ । यसमा उनी र अरू किसान पनि खुशी नै छिन् तर प्रविधिको विकासले पुराना मौलिक संस्कृति नै हराउन पुगेकामा भने कृषक तिवारीलाई चिन्ता छ ।
“महिना दिन अघिदेखि नै रोपाइँका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्रीको बन्दोबस्त गरेर राखिन्थ्यो, असार लागेपछि गाउँमा पालैपालो मेलापात हुन्थ्यो, दिनभर साथीसङ्गीसँगै हिलो खेल्दै बाजाको तालमा गीत गाउँदै धान रोपेर घर फर्कंदा थकानको अनुभूति पनि हराउने गथ्र्याे । अहिले ट्र्याक्टरले हिलो बनाएपछि दुई तीन घण्टामै रोपेर सकिन्छ”, तिवारीले भनिन् ।
यस्ता गीतमा महिलाका घर माइती गर्दाका दुःखसुख वेदनाका भाव पनि झल्किन्थ्यो । मेलापात गर्दा आफूले भोगेका कष्ट सबै साथीभाइसँग गीतमार्फत पोख्दा हल्का पनि हुने गर्दथ्यो भन्नुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरु । उनीहरुको अनुभव छ, “त्यस्तो गीतसङ्गीत न अहिले रोपाइँका बेला सुन्न पाइन्छ नत तीजकै बेलामा ।”
पहिला पञ्चेबाजाको तालमा धान रोप्ने, अन्न धेरै फलोस् भनी खेतको बीच भागमा भकारी राख्ने, एकअर्काबीच हिलो खेल्ने चलन रहेको पहिलेका बूढापाकाहरु बताउँछन् ।
पहिलाको धान रोपाइँ र अहिलेकामा धेरै परिवर्तन हँुदै गएको छ । दिनभर गोरुले जोत्ने खेतमा एक घण्टामै ट्र्याक्टरबाट काम सम्पन्न हुने हुँदा यी पुराना परम्पराहरु हराउन पुगेका हुन् भन्छन्, कृषक उदयराज अर्याल ।
“हलगोरु लिएर खेतमा जाँदा छुट्टै आनन्द लाग्थ्यो, बाजा बजाउने कोहीले रोप्ने कोहीले बीउ उखेल्ने गर्दा धान रोपाइँ पनि एउटा उत्सव जस्तै लाग्थ्यो”, उनले भने ।
खनजोत गर्न पावर टिलर, मिनी टिलर, ट्र्याक्टरको सुविधा गाउँगाउँमा पुगेपछि खेती गर्ने परम्परामा परिवर्तन आउन पुगेको छ । विभिन्न निकायबाट कृषि बाली उत्पादन बढाउन आधुनिकीकरण औजार कृषकलाई उपलब्ध गराउन थालेपछि कम लागत र छोटो समयमा कृषकले खेती गर्न थालेको रामपुर नगरपालिका कृषि शाखाप्रमुख रामहरि पाण्डेय बताउँछन् ।
रामपुर नगरपालिका–५ बाङ्गेपसल बस्ने कृषक ऋषिराम रेग्मीले छोटो समयमा धेरै काम सम्पन्न हुने भएपछि गोरुको ठाउँमा पावर टिलर, मिनी टिलर, ट्र्याक्टर लगाएर धान रोपाइँ गर्न थालेको बताए । कम लगानीमा काम छिटो सम्पन्न हुने भएपछि कृषकलाई धान रोपाइँ गर्न सजिलो भएको उनी बताउँछन् ।
गोरुले रोपाइँ गर्दा एक हप्ता दश दिनअघि देखि हल, खेतालाको बन्दोबस्त गर्नुपथ्र्याे । गोरुले जोत्दा कृषकलाई लागत पनि बढी पर्दछ भने समयमा नै हलगोरु नपाउँदा कृषकले निकै दुःख भोग्नुपथ्र्यो । यस समस्याबाट पनि कृषक अहिले मुक्त भएका छन् ।
घरमा गोरु पालेर अरूको खेतबारी जोतेर वर्षमा रु ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल हनुभएका रामपुर नगरपालिका–५ बहखोला बस्ने धनबहादुर श्रेष्ठ गोरुको विकल्पमा गाउँमा ट्र्याक्टर आएपछि आम्दानीको स्रोत नै गुमेको बताउँछन् ।
“बर्खामा खेत जोतेर गरेको आम्दानीले दशैँसम्म खर्च सजिलो गरी चल्दथ्यो, हिजोआज यान्त्रिकीकरणको विकास भएसँगै हलोको सट्टा हाते ट्र्याक्टर, पावर टिलर तथा ठूला ट्र्याक्टर गाउँमा भित्रिएपछि हलो जोतेर खाने हलीहरुको पेशा चौपट भएको छ”, उनको गुनासो छ ।
२९ असार २०७८ १७:३५